ပန်ဒိုရာ: နှင်းဆီတစ်ပွင့်ရဲ့ နားလည်ခြင်း
အကြွင်းမဲ့ ပဲ့တင်သံကိုပဲ တုံ့ပြန်တယ်။
ခူးဆွတ်လိုက်ဖူးတဲ့ လက်ဖျားတို့ရဲ့ နွေးထွေးမှု
ရောနှောရေးခြယ်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပန်းချီတေးသွားပဲ။
ရနံ့တွေ လိုသလို ဆက်သဖို့
မပျက်မကွက် ကျိုးနွံခယ ခဲ့ရုံလောက်ပါပဲ… တဲ့။
(နားလည်ခြင်းရဲ့ နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကို ဖတ်ရန်)
Posted by pandora at 5:10 PM
မှော်အောင်တဲ့ ကဗျာကဝေမလေး လို့ပဲ တင်စားလိုက်ချင်ပါဘိ ပန်ပန်ရေ...။
ကဗျာ နှစ်ပုဒ်လုံးကို ဖတ်ပြီး ခံစားသွားပါတယ်။ တွေးတတ်ရေးတတ်လိုက်တာလို့လဲ ချီးကျူးမိပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ နှင်းဆီတွေပွင့်နေသမျှ ...
နားလည်ခြင်းတွေဟာ နှင်းဆီတွေလို ဖူးပွင့်ပြီး ...
နှင်းဆီပွင့်တွေကိုလဲ နားလည်ပေးနေမိဦးမယ် ... ။
နှင်းဆီနံ့ ပျပျတောင်ရ လိုက် သ လို လို..
ဒီဘက်က နှင်းဆီကတော့ ပေါတောတောနဲ့
အဲဒါကိုတော့ နားလည်ပေးပါ... :D
နှင်းဆီတစ်ပွင့်ရဲ့ နားလည်ခြင်းကို နားလည်ဖို့ လာကြိုးစားသွားတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
သေချာတာပေါ့မပန်ရေ...ပယောဂကင်းကင်းနဲ့ပွင့်တဲ့ ပန်းမှ လန်းနိူင်တယ်မဟုတ်လား...ပွင့်တဲ့ပန်းတိုင်းလန်းနိူင်တာမှမဟုတ်ပဲလေ..
နှင်းဆီဟာ ရာသီမရွေး ဖူးပွင့်တယ်။ နှင်းဆီလို့ ဆိုလိုက်ရင်…..
မေရှင်ဆိုခဲ့တဲ့ “ဆင်းရနံ့ကမွှေးတယ်… မခူးရက်စရာကွယ်… အထူးပဲလှတယ်…. သူ့ကို သူပင်…. ဆူးတွေကိုဆင်” ဆိုတဲ့ ချစ်ရေစင်သီချင်းက ရင်ထဲကို ရောက်လာရော။
အဲဒီနောက်မှာမှ ဇော်ဝမ်း ဆိုခဲ့တဲ့…
ရူးမတတ်ကွဲ့ လိုချင်သေး…. ဆိုတဲ့ သီချင်းရယ်….
အဲဒီ သီချင်းကိုပဲ ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏက “ဂိုးဂွင့်ဂွက်ဂွေ” စတိုင်နဲ့ သမိန်ပေါသွပ်ကာတွန်းထဲမှာ ဖျက်ဆိုထားတဲ့…
ဂွစ်ဂွင်းဂွီ ဂွဂွ…………….။ ဆိုတဲ့ စာသားလေးတွေပါ ရောက် ရောက်လာတတ်တယ်ခင်ဗျ။း-)
နှင်းဆီရဲ့ဖူးခြင်းပွင့်ခြင်းဟာ အခြားရာသီပန်းတွေလို မဟုတ်ပါဘဲ ရာသီရဲ့စိုးမိုးမှုကင်းသတဲ့။
ဆူးရိုင်းလေးတွေနဲ့ တနည်းအားဖြင့် သူ့လက်သည်းပုန်းလေးနဲ့ သူ့အလှသူ ကာကွယ်ထားသူလည်း ဖြစ်တယ်။
အကြွင်းမဲ့ ပဲ့တင်သံကိုပဲ တုံ့ပြန်တယ်။”
နှင်းဆီရဲ့ စိုတဲ့အသွေးအရောင်လို့ ခံစားမိတယ်...သူ့အရောင်အသွေးဟာ အခြားပန်းတွေ မှောင်သွားစေခဲ့ပေါ့.။
ခူးဆွတ်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက် နှင်းဆီဟာ နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကို ကူးပြောင်းသွားတယ်။ခူးဆွတ်သူလက်ဖျားတွေကို အဆုံးသတ်ခြင်းတွေအကြောင်း ပြောနေပြန်သတဲ့..
ပထမဆုံးထိတွေ့ခဲ့တဲ့ နှင်းရည်တစ်စက်ကိုတော့ နှင်းဆီပွင့်ချပ်ကလေးက အမြဲလည်း သတိရနေပြန်တယ်...။
ရောနှောရေးခြယ်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပန်းချီတေးသွားပဲ။”
ဒါကတော့ နှင်းဆီလေး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ လူမှုဘဝအထွေထွေတွေ.........
မပျက်မကွက် ကျိုးနွံခယ ခဲ့ရုံလောက်ပါပဲ… တဲ့။”
နှင်းဆီသခင်မလေး စိတ်အပျင်းပြေ မဖဲ့ခြွေမချင်း လောကဓမ္မတွေ သင်ယူဖို့ လောကထဲ ရောက်လာခဲ့သလား နှင်းဆီလေးရယ်...။
အစ်မကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်း ကဗျာတွေ သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေထဲက နှင်းဆီဖွဲ့တွေ အကြောင်းလည်း ဆက်တွေးမိတယ်။
ဘာမှ မဆိုင်ပါဘဲ “နှင်းဆီဖြူရဲ့အဝေးက လူတစ်ယောက်” သီချင်းလေးလည်း လွမ်းမိသွားတယ်။
အချိန်မရတာနဲ့ အဖြစ်မရှိတာနဲ့ပေါင်းပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်၊
သူများကယောင်ခြောက်ဆယ်..ပိုးဥက ၁၂၀ ဖြစ်နေတာ အဟီး...
သံလွင်အိပ်မက် မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၃) အမှတ် (၃)
သံလွင်နဲ့အတူ ပြန်လည် စီးဆင်းလာမယ်